Alshabaab oo muudo bil ka yar toogsho ku fuliyey 7 ruux – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Baraawe – Mareeg.com: Alshabaab ayaa shalay meel fagaare ah oo ku taalla degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ku toogtay 3 dhallinyaro ah oo ay ku eedeeyeen basaasnimo.
Qaadiga xukunka ku dhawaaqay oo aan magaciisa la sheegin ayaa ku eedeeyey 3-dan dhalliyaro iney u bsaasayeen Maraykanka, Kenya iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
Magacayada dhllinyarada la toogtay ayaa lagu kala sheegay: Saalax Fu’aad Cismaan oo 24 sano jir ah, Maxamed Cumar Diiriye oo 22 sano jir ah iyo Maxamed Aadan Ibraahim 26 sano jir ah.
Saalax Fu’aad Cismaan waxey Alshabaab ku eedeeyeen inuu qandaaraas ku heystay shaqaaleysiinta dhallinyaro ku biira ciidamada nabadsugidda Soomaaliya.
“Bil kasta waxaa lagula heshiiyay inuu soo qoro afar qof isagoo qaadanayay kun doolar marka uu soo qoro dadka loo diray” sidaasi waxaa goobta ka sheegay qaadiyada xukunka riday oo Alshabaab ka tirsan.
Maxamed Cumar Diiriye waxaa lagu soo eedeeyay inuu ahaa jaajuus ushaqeeya Nabadsugidda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan qeybta la shaqeysa sirdoonka Maraykanka, sida warka loo dhigay. Alshabaab waxey sheegeen in wilkaasi mushaar u qaadanayey $200 ilaa $300.
Maxamed Aadan Ibraahim waxaa Alshabaab ku eedeeyeen ina dileen inuu basaas u ahaa Kenya, iyagoo xusay in lagu soo shaqaaleysiiyey Nairobi kadibna loo soo wareejiyay Mandheera, kadibna looga soo diray Muqdisho.
Lama oga halka laga qabtay dhallinyaradan iyo iney horay Alshabaab uga tirsanaayeen iyo inkale, waxaana wararku sheegayaan iney weli xabsiyada ururkaas ay ku jiraan dad farabadan.
29-kii May 2014 ee tagtay ayaa sidaan oo kale Alshabaab 3 dhallinyaro ah ku toogteen degmada Buulo Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidoo kale, bartamihii bishii May, Alshabaab ayaa dil toogasho ah ku fuliyeen nin ka mid ahaa dadka degmada Baaradheere ee gobolka Gedo, waxaana dilalkaasi ka dhigan yihiin in muddo bil ka yar Alshabaab toogteen 7 ruux.
Japan:Securing the Rule of Law at Sea